Info. About सिड्नी ओपेरा हाउस, कामिगामो तीर्थ, तक्षशिला, अजरबैजानका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची, अफगानिस्तानका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची
★ Free online encyclopedia. Did you know? page 119
सिडनी ओपेरा हाउस, Sydney, New South Wales, Australia, मा स्थित प्रदर्शन कला मा एक धेरै-terrestrial केन्द्र it. परिकल्पना डेनमार्क पास्टर यूहन्ना पछि प्रयोग गर्नुभयो साथै उहाँले अधिकांश भवन पनि प्रदान गरिएको छ ।
Kamigamo तीर्थ मा एक शहर मा उत्तर नदी देखि किनारा गर्न को रहलपहल को एउटा महत्त्वपूर्ण शिन्टो विहार छ । यो स्थापना लागि पहिलो पटक थियो 678, मा भएको छ । यो औपचारिक नाम को एस-akyikatchy तीर्थ गर्न । यो जापानको सबैभन्दा प्राचीन शिन्टो, त्यहाँ एक गरेक ...
Takshila पुरातन भारत गान्धीको गरेर राज्य, राजधानी, र हालै पाकिस्तान, अंग्रेजी राज्य को रावलपिंडी जिल्ला, मा स्थित एक पुरातात्विक ठाउँ । यो ठाउँ बौद्ध धर्म र हिन्दू धर्म, दुवै धर्मको केन्द्र बिन्दु भएको थियो ।
2014 मा, को मिति अजरबैजान2को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति अफगानिस्तान,2वटा-सम्पदाको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
अर्जेन्टिना यूनेस्को विश्व सम्पदाको को सन्धि को अगस्ट 23, 1978, मा हस्ताक्षर गरेको थियो । 2014 को मिति9क्षेत्रमा Vista मा क्षेत्र को सूचीमा समावेश गरिएको छ, जसमा पाँच छन्, सांस्कृतिक क्षेत्र चार प्राकृतिक क्षेत्र हो । एक थप6को क्षेत्र मा Vist ...
2014 मा, को अल्जेरिया जहाँसम्म7संग सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति आइभोरी कोस्ट गरेको4को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति Armenia3को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति ICRC संग5को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति इस्राएलको 8 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति7मा संयुक्त राज्य अमेरिका संग को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति इथियोपिया, मा संग9को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति इन्डोनेसियाका 8 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति इराक गरेको4को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति को इरादा संग 17 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति उज्बेकिस्तान4को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, मिति उत्तर कोरियाको न2को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति उरुग्वे2संग सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 को रूप द्वारा एल क्लार्क 1 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति ओमान,4संग सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति kegoc 1 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति काजकिस्तान गरेको4को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति Kirgizstan2को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति केन्या, एक 6-छवटा छ सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति केप शायद संग 1 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति कोलम्बिया मा7संग सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति क्यानाडा 17 संग सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति क्यामरुन2को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति घन9को संग सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति गावोन 1 संग सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति गाम्बिया लागि2को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति गिनी, 1 वटा-सम्पदाको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति ग्वाटेमाला3संग सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, मिति र2को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति तिहार, 1 वटा-सम्पदाको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति मार्क गरेको 47 संग सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति चिली,6संग सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति जापानको 18 संग सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति जाम्बिया 1 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति जिम्बाब्वे संग5को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति जोर्डन4को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति लिए 1 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति टुनिशिया गरेको 8 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति डेनमार्क6मा छ-सम्पदाको को संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति डोमिनिकन गणतन्त्र 1-छवटा छ सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति डोमिनिका छ 1 को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति ताजिकिस्तान2को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
2014 मा, को मिति तान्जानिया7को सम्पदाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र पहिचान मा, प्रदान गरिएको छ ।
वयवसथपन इनडन इथियोपियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची चिनका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची मनवदधरवकसबचफरक online मनव सकषरत इजरयलक मनवधनवसभनकह premium मलकहर login इक्वेडरका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची नपलकपरचय number इजपटक नपलसतभनकह सबलगशकषpdf नयशवसमपदषतरहरकसच नलकपरतकसमपदहर पहचन subisu nettvhome डेनमार्कका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची समपद जपनक मनवसरतवयवसथपनभनकह जमबय यनडशवसमपदषतरहरकसच